एनआरएनए बौद्धिक बहसः विदेशमा सिकेको ज्ञान नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने ? – News Portal of Global Nepali
उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । डाः उत्तम गौलीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ब्रेन गेन सेन्टरका कोअर्डिनेटर सन्तोष गौतमले विदेशी भुमिमा रहेका नेपालीहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबमा नेपालसँग जोड्न ब्रेन गेन सेन्टरले पुलको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । इमेल तथा विभिन्नमाध्यमबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका बौद्धिक नेपालीहरुसँग सम्पर्क गर्ने काम ब्रेन गेन सेन्टरले गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘को कहाँ हुनुहुन्छ रु उहाँहरुको विज्ञता कस्तोे छ भनेर हामी खोजि गर्छौँ । देशभित्र र बाहिरका विज्ञहरुलाई जोड्ने तथा उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ब्रेनगेन सेन्टरले गर्छ’ सेन्टरका कोअर्डिनेटर सन्तोेष गौतमले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अमेरिकन कर्नरका कोअर्डिनेटर हृदयशकुमार केसी, युकेबाट डाः पुष्पराज पन्त, डा. एकनाथ खतिवडा, कर्णाली प्रदेशबाट अनन्तराज पन्त लगायतले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।